Bobumba Grain Abrasive
Glassfibre Esekelwa amapuleti
Quick Guqula Izinkinobho
Nokwakha uthi lokuphotha for Flap Amasondo
Vitrified Ukugaya Amasondo
Surface Ukugaya Cylindrical Ukugaya
Wotho Gear Ukugaya
Gear Ifomu Ukugaya
Resin-eziboshiwe Ukugaya Amasondo Sika-off Amasondo
amasondo Ukugaya ngqo Bolt-up
Hypodermic inaliti Ukugaya
Ecindezelekile Centre Ukugaya Amasondo
Okuhlezi emqondweni Sika-off Amasondo
Elikhulu Sika-off Amasondo
amasondo Precision ahlabayo
Velcro Discs & PSA Amadiski
Quick Guqula Amadiski
Ephekiwe Fibre Amadiski
Velcro Amadiski futhi PSA Amadiski
amasondo super ezinkulu asikiwe
esheshayo ushintsho akwazi ukugcina okungezona nokwelukiweyo
esheshayo ushintsho izinkinobho
Izinhlamvu bobumba Abrasive
amasondo ngokunemba cutting
1.Characters of CA eyenziwe sol-gel indlela
CA, ekhishwa-ijeli sol indlela, uhlobo sintered okusanhlamvu athile. Ngakho-ke ibizwa nangokuthi u-njengoba SG okusanhlamvu athile. Ubukhulu crystal lincane kakhulu, okuyinto 100-500nm kuphela, futhi kuphela ngaphansi ngephesenti elilodwa-common corundum usayizi crystal. Ucezu 46 # okusanhlamvu iqukethe izigidigidi crystal izinhlayiya. Lapho ukugaya, nangangesihlabathi bendabuko kagesi alumina tho babe flat futhi deactive, futhi kalula eyanyatheliswa ngalo kusukela amathuluzi athile ngaphansi amandla ukugaywa. ukuphila inkonzo yayo mufushane. Nokho, i-CA, okusho SG okusanhlamvu olwalwenza, yonke inqubo egqoke futhi inqubo oziphoqelela imimese. Phakathi nokuphila inkonzo yayo, ebukhali onqenqemeni entsha ukugaya udalula njalo lapho passivating esihle crystal okusanhlamvu eyanyatheliswa ngalo kusukela amathuluzi ukugaya ngaphansi amandla ukugaya, okwenza hlamvu isimo abukhali njalo. Ngakho, amathuluzi athile esenziwe CA kukhona eside ekuphileni band, ikhono elihle self-imimese, ukuzisika high kahle, kanye umlilo ungavuthi workpieces.
Ngenxa microstructure yayo ezahlukene, CA libonisa umehluko ku olwalwenza okusanhlamvu ukwa ukuziphatha. CA libonisa kanye umonakalo crystal ukwa, kuyilapho bendabuko kagesi alumina tho bubonisa umonakalo ukwa transgranular. Ngakho-ke, ukuqina CA kabili kunalelo alumina ezivamile tho.
CA ezivezwa-ijeli sol indlela has ezifanayo amakhemikhali ukwakheka kanye ubulukhuni ukuba WFA (White tho Alumina). Ngenxa amancane microcrystalline oyiyo iyunifomu, ubunzima okusezingeni eliphezulu futhi amancane ukusebenza eziphukile, CA kungenziwa kabanzi ngokugedla nzima-to-inqubo izinto ezifana ithuluzi lensimbi, ezinzima insimbi engagqwali, ukushisa ukumelana ingxubevange steel, njll
2.Features amathuluzi athile esenziwe CA
(1) I izinhlamvu ebukhali kakhulu, okwenza kube has ahlabayo umthamo eqinile, okusezingeni eliphezulu ukugaya kahle. Ingasetshenziselwa ngoba ahlabayo lamakhulu akhatshana, roughing okuphakelayo, duty ezisindayo futhi okusezingeni eliphezulu kahle ukugaya. Ngokusho ukuhlola, olulodwa inqubo yokudla ongafinyelela 0.3mm noma ngaphezulu, ukususwa metal izinga ingaphezu kabili common corundum ukugaya amasondo.
(2) ubunzima Good, nemihuzuko ezincane, kanye namasondo ukugaya nge ukuma nokugcinwa ezinhle. Ukuze ngokunemba ukugaya ifomu ukugaya, ukunemba ephakeme ntathu kanye nosayizi ukuma ukungaguquguquki kungenziwa ithole kalula.
(3) nokuqina okuphezulu futhi ukuphila isikhathi eside. Lungafinyelela 5 to10 izikhathi ezivamile corundum ukugaya amasondo. Okuphansi esikhundleni imvamisa kunganciphisa asizayo ukucutshungulwa isikhathi sokuphumula, okwenza kube kunikela ukusetshenziswa ukulawula zezinombolo umshini okuzenzakalelayo, eqaphela ukukhiqizwa othomathikhi.
(4) Okuhle ukusebenza self-imimese, hhayi odla. Kungaba ukugcina engaguquki ukugaya ukusebenza, ukunciphisa ukulungiswa (mayelana kuphela 1/3 ye-ezivamile amasondo corundum ukugaya) futhi sithuthukise kwemikhiqizo lifakazelwa.
(5) Ngo-ukugaya ukusebenza, CA ukugaya amasondo zingcono kakhulu ukwedlula ezivamile corundum ukugaya amasondo. Ukuze intengo, CA ephansi kakhulu kunalokho CBN futhi idayimane Abrasives, kuyilapho ubulukhuni bayo ufana ukuthi alumina ezivamile tho, okwenza kube kungadingeki ekhethekile ukugaya Equipments namadivayisi ilungiswe. Ngakho-ke ayinakho izidingo ezikhethekile ukugaya Equipments futhi akukho nobunzima lokumiswa kuqhathaniswa CBN futhi idayimane Abrasives. Iphinde alinaso izidingo ezikhethekile ukugaya uketshezi. Ngakho, kulula ukusakaza ukusetshenziswa kwalo.
Ukwakheka 1.Chemical (inani ejwayelekile):
2. Inkomba Physical:
inhlanganiso (g / cm3) Ball Ukugaya ubunzima crystal Usayizi
3.90 65,6% 0.15μm
Previous: amasondo ngokunemba cutting
Blue bobumba Grain Abrasive
Sg Abrasive yokusanhlamvu
White bobumba Grain Abrasive
Zirconia Aluminium oxide
Black Silicon Carbide (C)
Brown tho Alumina (A)
White tho alumina (WA)
Amadivayisi: 18C Tianzhi Isakhiwo, NO.63 Beijing Rd, Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, China.
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye ikheli lakho kithi thina sizothintana ngokushesha.